Teny tsara indrindra avy amin'i Shonda Rhimes - Victor Mochere
Shonda Lynn Rhimes dia mpamokatra fahitalavitra amerikana, mpanoratra senatera ary mpanoratra. Izy no malaza indrindra amin'ny maha-mpamorona ny showrunner, talen'ny mpanoratra ary mpamokatra mpanatanteraka-ny tantara ara-pitsaboana amin'ny fahitalavitra Grey's Anatomy, ny fanaony manokana, ary ny andian-tantara mampientam-po ara-politika Scandal. Rhimes koa dia mpamokatra mpanatanteraka amin'ny fahitalavitra ABC Off the Map, How to Get Away with Murder, The Catch, ary Grey's spin-off Station 19. Tamin'ny taona 2015, namoaka ny bokiny voalohany izy, fahatsiarovana, Year of Yes. : Ahoana ny fomba fandihizana azy, ny fijoroana amin'ny masoandro, ary ny maha-olona anao. Tamin'ny taona 2017, nilaza i Netflix fa nanao fifanarahana fampivoarana nandritra ny taona maro niaraka tamin'i Rhimes, izay ho andian-dahatsoratra Netflix Original ny vokatra ho avy rehetra.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'ny Shonda Rhimes dia voatanisa etsy ambany.
"Na iza na iza milaza aminao fa manao izany rehetra izany izy ireo dia mpandainga." - Shonda Rhimes
"Ny Badassery, hitako, dia ambaratongam-pitokisana vaovao - amin'ny tenanao sy ny manodidina anao." - Shonda Rhimes
“Badassery: fomba fahafantarana ny zava-bitan’ny tena sy ny fanomezam-pahasoavana ananan’ny tena, ny fanekena ny zava-bita sy ny fanomezam-pahasoavana ananan’ny tena, ary ny fankalazana ny zava-bitany”. - Shonda Rhimes
"Satria na sarotra toy inona aza ny resaka, dia fantatro fa eo amin'ny lafiny ilany amin'io resaka sarotra io dia misy fiadanana." - Shonda Rhimes
"Ny maha-reny antsika dia mitondra antsika mifanatri-tava amin'ny tenantsika amin'ny maha-zanaka antsika, miaraka amin'ny reninay amin'ny maha-olombelona antsika, miaraka amin'ny tahotra maizina indrindra momba ny tena maha-izy antsika." - Shonda Rhimes
“Tsy asa ny maha-reny. Aza manipy zavatra amiko intsony. Miala tsiny aho fa tsy izany. Hitako fa manafintohina ny maha-reny ny miantso ny maha-reny ho asa.” - Shonda Rhimes
"Tsy fomban-drazana intsony ny hoe nentim-paharazana." - Shonda Rhimes
“Atsaharo ny nofy. Aoka ho mpankatò ianao fa tsy ho mpanonofy. - Shonda Rhimes
“Aza mifona. Aza manazava. Aza mahatsiaro ho ambany noho. Rehefa mahatsapa ianao fa mila miala tsiny na manazava hoe iza ianao, dia midika izany fa ny feo ao an-dohanao dia milaza aminao ny tantara tsy mety. Fafao madio ny takelaka. Ary soraty indray izany.” - Shonda Rhimes
“Mahafinaritra ny nofy. Nofinofy fotsiny anefa ireny. Mihelina, ephemeral. Manja. Saingy ny nofinofy dia tsy tanteraka noho ny nofinofinao fotsiny." - Shonda Rhimes
“Ny 'eny' tsirairay dia manova zavatra ato anatiko. Ny 'eny' tsirairay dia somary manova kokoa. Ny 'eny' tsirairay dia miteraka dingana vaovao amin'ny revolisiona." - Shonda Rhimes
"Toy ny tsy misy dikany ny zava-drehetra mandra-pahatonganao ao amin'ny saina tsara." - Shonda Rhimes
"Ny fahasambarana dia avy amin'ny maha-izy anao marina fa tsy hoe iza no heverinao fa tokony ho izy." - Shonda Rhimes
"Ny fahasambarana dia avy amin'ny fiainana araka izay ilainao, araka izay tianao. Araka ny lazain'ny feonao anaty anao. " - Shonda Rhimes
"Mihena ny fankahalana, mitombo ny fitiavana." - Shonda Rhimes
“Feno ny vata fitaovany. Nianarany ny tsy hamela ny sombin-javatra ilainy mba hahatongavana amin’izay tian’ny hafa. Nianatra ny tsy hanaiky lembenana izy. Nianatra tsy hilamina izy. Nianatra izy, na dia sarotra aza, ny fomba hahatongavana ho masoandrony manokana.” - Shonda Rhimes
“Tsy tsara vintana aho. Fantatrao hoe iza aho? Mahira-tsaina aho, manan-talenta, manararaotra ny fahafahana mahazo ahy ary miasa mafy aho. Aza atao hoe tsara vintana aho. Antsoy hoe ratsy fanahy aho. " - Shonda Rhimes
“Heveriko fa maro ny olona manonofy. Ary raha mbola variana manonofy izy ireo, ireo olona tena faly, ireo olona tena mahomby, ireo olona tena mahaliana, matanjaka, mifaly? Sahirana manao.” - Shonda Rhimes
“Raha tsy mamoaka ny lohako amin'ny akorandriaka aho ary mampiseho amin'ny olona hoe iza aho, dia ho heverin'ny olona rehetra fa izaho no akorandriaka. - Shonda Rhimes
"Raha tianao ny hampitsahatra ny zava-dratsy tsy hitranga aminao, dia atsaharo ny manaiky fako ary mangataka zavatra bebe kokoa." - Shonda Rhimes
“Ny asa mafy no mahatonga ny zavatra hitranga. Asa mafy no miteraka fiovana.” - Shonda Rhimes
“'Tsy mirehareha raha afaka manohana azy ianao', hoy aho nibitsibitsika tamin'ny tenako isaky ny maraina. Izany no teny tiako indrindra Muhammad Ali. Raha manontany ahy ianao, dia namorona ny fieboeboana maoderina i Ali. " - Shonda Rhimes
“Tsy tonga indray mandeha ny famoizana tena. Ny famoizana tena dia mitranga indray mandeha 'tsia'. - Shonda Rhimes
“Milaza i Lucky fa tsy nanao na inona na inona aho. Lucky dia midika fa nisy zavatra nomena ahy. Lucky dia midika fa nomena zavatra tsy azoko aho, izay tsy niasako mafy. " - Shonda Rhimes
“Ny fanambadiana dia fiaraha-miasa ara-bola. Tsy misy ifandraisany amin’ny fitiavana ny fanambadiana. Ny fitiavana dia safidy azontsika atao isan’andro.” - Shonda Rhimes
“Tsy miala amin’ny famantaranandro mihitsy ny reny, tsy miala sasatra mihitsy ny reny. Ny maha-reny antsika dia manova antsika indray, mamorona antsika, manimba ary manangana antsika indray.” - Shonda Rhimes
“Tsy nisy vehivavy na dia iray aza tao amin'ny efitrano no nahazaka ny nilazana hoe: 'Mahafinaritra ianao'. Tsy zakako ny nilazana ahy fa mahafinaritra. Inona no tsy mety amintsika?” - Shonda Rhimes
"Rehefa tsy nanantena ny ho tia azy intsony aho, raha vao nitsahatra ny nitaky ny hampihenana ny lanjany ho mora na mahafinaritra, raha vao nijanona tsy niandry ny fanombohan'ny tarika aho, dia nanjary azo leferina ny fiheverana izay niditra tao am-bavako." - Shonda Rhimes
“Iray. Teny. TSIA. Tsia dia teny mahery. - Shonda Rhimes
“Tena tsy tian'ny olona izany rehefa manapa-kevitra ny hiala amin'ny lalana ianao ary hianika ny tendrombohitra. Toa mampikorontan-tsaina na dia ireo olona tena tiany aza.” - Shonda Rhimes
“Mankaleo ny tonga lafatra, ary tsy tena misy ny nofy. ATAO fotsiny.” - Shonda Rhimes
“Lazao hoe ENY amin'ny fanekena izay rehetra sy ny fankasitrahana rehetra momba ny fahatairana mahatalanjon'ny tena manokana miaraka amin'ny 'Misaotra' mazava sy tony ary tsiky matoky tena ary tsy misy hafa." - Shonda Rhimes
“Ny hoe eny dia herim-po. Ny hoe eny dia ny masoandro. Ny hoe eny no fiainana. - Shonda Rhimes
"Indraindray ny vehivavy tapaka dia mila divay mena kokoa." - Shonda Rhimes
“Ny tanjona dia ny ahafahan'ny tsirairay manokatra ny fahitalavitra ary mahita olona mitovy aminy sy tia toa azy. Ary tsy misy hafa amin'izany, ny tsirairay dia tokony hampandeha ny fahitalavitra ary hahita olona tsy mitovy amin'izy ireo sy tia toa azy ireo. - Shonda Rhimes
“Tsy misy lisitry ny fitsipika. Misy fitsipika iray. Ny fitsipika dia: tsy misy fitsipika. " - Shonda Rhimes
"Misy fandresena ao amin'ny fanoloran-tena." - Shonda Rhimes
Hoy izy ireo aminao: Araho ny nofinao. Henoy ny fanahinao. Ovao izao tontolo izao. Ataovy ny marikao. Tadiavo ny feonao anaty ary ataovy mihira. Raiso ny tsy fahombiazana. Nofy. Manonofy ary manonofy lehibe. - Shonda Rhimes
“Eritrereto izy ireo. Misondrotra ny loha, mibanjina ny maso. mihazakazaka. Haingana feno. Voaozona ny gravity. Mankany amin'ilay sosona fitaratra matevina izay ny valin-drihana. Hazakazaka, hafainganam-pandeha feno ary fianjerana. Nianjera tamin’io valin-drihana io ka nianjera.” - Shonda Rhimes
"Ity Eny ity dia momba ny fanomezana alalana ny tenanao hanova ny fifantohana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny zavatra mahasoa anao ho amin'ny zavatra mahasambatra anao." - Shonda Rhimes
“Manomàna an-tsitrapo ora vitsivitsy. Mifantoha amin'ny zavatra ivelan'ny tenanao. Manokàna ampahany kely amin'ny herinao amin'ny fampihenana an'izao tontolo izao isan-kerinandro. " - Shonda Rhimes
"Isika rehetra dia mandany ny androm-piainantsika amin'ny fandaozana ny tenantsika noho ny tsy fisian'ity fomba ity na toy izany, tsy manana an'ity zavatra ity na an'izany, tsy mitovy amin'ity olona ity na ity olona ity." - Shonda Rhimes
“Rehefa mandà ny teny fideran'ny olona iray ianao, dia lazainao fa diso izy ireo. Lazainao amin’izy ireo fa nandany ny fotoanany izy ireo.” - Shonda Rhimes
“Iza ianao ankehitriny… izany hoe iza ianao. Mahereza. Mahagaga. Aoka ho mendrika. Henoina.” - Shonda Rhimes
“Eny amin'ny zavatra rehetra mampatahotra. Eny amin'izay rehetra mitondra ahy hiala amin'ny faritra mampionona ahy. Eny amin'ny zava-drehetra izay heverina fa mety ho adala. " - Shonda Rhimes
“Afaka miala amin’ny asa ianao. Tsy afaka miala amin'ny maha-reny aho. Reny mandrakizay aho.” - Shonda Rhimes
“Tsy maintsy mandroso hatrany ianao. Mila manao zavatra foana ianao, manararaotra ny fotoana manaraka, mijanona ho misokatra amin'ny fanandramana zava-baovao. ” - Shonda Rhimes
“Fantatrao hoe inona no mitranga rehefa tanteraka daholo ny nofinao? Tsy misy na inona na inona.” - Shonda Rhimes
“Anao ny vatanao. Ahy ny vatako. Tsy misy ny vatan'ny olona manome hevitra. Tsy maninona na kely, na lehibe, na curvy, na fisaka. Raha tia anao ianao dia tiako ianao.” - Shonda Rhimes